Dome RTA Ankorondrano :: Hotsiahivina amina seho tokana ny hiran’ny taona 60, 70, 80 ary ny 90 • AoRaha
Hiavaka ny seho miandry an’ireo mpankafy mozika etsy amin’ny efitrano malalaky ny Dôme RTA Ankorondrano, amin’ny zoma 22 novambra izao, manomboka amin’ny 7 ora hariva. “Les Années­Tendres” no lohatenin’ny fampisehoana izay hamerenana an’ireo hira nalaza tamin’ny taona 60, 70, 80 ary 90. Miara-dalana amin’io fotoana io ihany koa ny fanamarihana ny fahadimy amby roapolo taona an-tsehatr’i Nanja, fantatra amin’ny fanentanana fety aman-danonana.
Mpanakanto maromaro nandia vanim-potoana samihafa no hampivondrona talenta hanafana ny alina. Ankoatra an’i Nanja, hitondra ny talentany ao ry Lilie sy Rolly ary Ony (Zandry Gasy). Ho avy ao koa ny Nanj’Animation, havanana amin’ny fianga­liana hirana mpanakanto hafa, malagasy sy vahiny, amin’ny fombany manokana.
“Seho tsy manam-paharoa no haroso ho an’ny mpijery, amin’io fotoana io. Nanaovana fikarohana manokana ny nisafidianana an’ireo hira halahatra ao. Noketrehina hifanaraka amin’izay ny ravaka sy ny haingo eny an-tsehatra”, hoy ny mpikarakara.
Tsy nataon’ny mpika­rakara ambanin-javatra ny lafiny feon-kira satria mpitendry manana ny maha izy azy no hisahana ny fikira­kirana ny zavamaneno. Torak’izay koa ny lafiny fanamafisam-peo sy ny jiro.
Vokatra hiragasy :: Namoaka ny kapila vaovao ry Ramilison Besigara Zanany
Ahiahina vaky fasana :: Sarona ireo telo lahy niaraka tamina taolan-dava fito amby efapolo